सरकारमा जसपा झन् बलियो, ठाकुर पक्षका २० सांसदमध्ये ११ मन्त्री ! « Sagarmatha Daily News
सरकारमा जसपा झन् बलियो, ठाकुर पक्षका २० सांसदमध्ये ११ मन्त्री !
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको चुनावी सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहले गतिलो हिस्सा पाएको छ । आज हुन लागेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाबाट अझै एक मन्त्री थप्ने भएका छन् ।